photoshop - စာမျက်နှာ4- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: photoshop (စာမျက်နှာ 4)
8 / 19 / 08 အပေါ် posted မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အော်ပရေတာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: 15 / 19 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘများအတွက်လက်မှတ်ရမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အော်ပရေတာရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 08 / 19 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply သြဂုတ် 19, 2019 အပေါ်ဂီတဗီဒီယို။3နာရီ။ reel နှင့်နှုန်းကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade? ကျေးဇူးပြု ...
ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်မပေးထားလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘဇာတ်ကြောင်းဂီတဗီဒီယိုပေါ်မှာငါနှင့်အတူပူးပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုထုတ်လုပ်လိုင်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ငါက New York City, ၌ဤအောက်တိုဘာလ directing တာပါ။ အကျဉ်းခုနှစ်တွင်တစ်ဦးသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်မေတ္တာ၌ madly ကျရောက် ...
Colorist ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: အပတ်9/2လစာ / နှုန်း $ 500 ယောဘသည် 08 / 15 / 19 09 / 02 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ရရှိနိုင်မယ့် colorist ၏တစ်ပတ်ရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ၏ တစ်ဦး9မိနစ်တိုတိုရုပ်ရှင်များအတွက်2/ 16 ။ ကျနော်တို့အလုပ်၏တစ်ရက်ဖြစ်မျှော်လင့်သောအရာကိုများအတွက် $ 500 အခကြေးငွေပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ Upgrade ...
08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် Post ကိုညှိနှိုင်းရေးမှူးကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: စက်တင်ဘာလလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစက်တင်ဘာလဘို့ငါက NYC အတွက် post ကိုညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် AES အဘို့အကြည့်ဖို့စတင်တာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား HGTV များအတွက်နေအိမ်အဆောက်အဦပြပွဲပေါ်မှာ။ အကောင်းဆုံးကတော့, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပြီးသားကြောင်းအတွက် HGTV / Discovery နှင့်အတူအချို့သောအတှေ့အကွုံရပါလိမ့်မယ် ...
တနင်္ဂနွေ Anchor / သတင်းထောက်
တနင်္ဂနွေ Anchor / သတင်းထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ကိုလံဘီယာ, 08 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ပေးမ SC Duration: လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘအတွက်ယောဘသည် WIS ရုပ်မြင်သံကြား, အ #1 ဘူတာရုံများနှင့်ဆုရအား NBC Affiliate အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားရဲ့မြို့တော်၎င်း၏လာမယ့်တနင်္ဂနွေ Anchor / သတင်းထောက်ရှာဖွေနေသည်။ အောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းလှုံ့ဆော်သူသက်သေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နှင့်ရမယ် ...
VFX အဆိုတော်ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့, 05 / 14 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်, CA Duration: မပေးထားလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ Los Angeles မြို့ဂီတဗီဒီယိုဒါရိုက်တာနှင့် / သို့မဟုတ် VFX အနုပညာရှင်တွေရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ ယခုနှစ်လာမည့်စီမံကိန်းများ slate များအတွက်ပါရမီဒါရိုက်တာများနှင့် / သို့မဟုတ် VFX အနုပညာရှင်ရှာဖွေနေ။ သင့်ရဲ့ reels ပေးပို့ကျနော်တို့ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီး ...
5 / 19 /5အပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: 26 / 05 နှင့် 14 / 19 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 05 / 19 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား & တွင်-သတ်မှတ်မည် Los Angeles မှာအသံရောနှော။ ကျနော်တို့ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းတစ် SAG တိုတောင်းများအတွက် PD နဲ့ audio ရှာနေကြပါသည် ...
Sizzle Editor ကို
Sizzle Editor ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့, 1 /2/ 05 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်, CA Duration: 14-19 ရက်သတ္တပတ်လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမထားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရှာဖွေနေ / Premiere အယ်ဒီတာ sizzle (အဘယ်သူမျှမပထမဦးဆုံးအတိုင်မား ) Silver, ရေကန်တစ် Gig အပေါ်ယခုအပတ်ကိုစတင်။ 1-2 ပတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, reels နှင့်သက်ဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပေးပို့ပါ။ ...
Gaffer ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Nashville, TN Duration:5/ 22 -5/ 23 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 05 / 14 / 19 အပေါ် posted 05 / 22 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ် Gaffer ရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမနှင့် Nashville အတွက် 22-23 အပေါ်တစ်ဦးရိုက်ကူးများအတွက်အနည်းငယ် pas ။ သငျသညျရရှိနိုင်မှုသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားရှိပါကအဆက်အသွယ်ရဖို့ပါ။ အဘို့အ Now ကို Upgrade ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration:5/ 19 နှင့်5/ 26 လစာ / နှုန်း 05 / 14 / 19 05 / 19 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး & တွင်-သတ်မှတ်မည် Los Angeles မှာအသံရောနှော။ ကျနော်တို့ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းတစ် SAG တိုတောင်းများအတွက် PD နဲ့ audio ရှာနေကြပါသည် ...
အငယ်တန်း Editor ကို
အငယ်တန်း Editor ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်နယူးယောက်, 05 / 14 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်နယူးယော့ Duration: အပိုင်းအချိန်လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘကျနော်တို့သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခြိနျပိုငျးအငယ်တန်းအယ်ဒီတာရှာဖွေနေတဲ့ယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ည။ အဆိုပါအငယ်တန်းအယ်ဒီတာရှေ့ဆက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သတင်းအထုပ်တည်းဖြတ်နှင့်ပို့ဆောင်ရွေ့လျားတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည် ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်ဝါရှင်တန်ဒီစီ Duration:5/ 22 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 05 / 14 / 19 အပေါ် posted အဘို့, ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့အောက်ပါရှာဖွေနေသည်ယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 05 / 22 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 5.22: pas အသံရောနှော Boom ကအေဲနျဂြီငှားရမ်းအိမ်များအော်တိုငှားရမ်းပေးသူယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade အကြုံအကြုံ? ကျေးဇူးပြု ...
လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: အတွေ့အကြုံကိုယောဘကိုအပျေါအခွခေံလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေး 05 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ယောဘသင့်မစ်ရှင်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား for: ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ တိရိစ္ဆာန်များ။ PETA ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာလူမှုမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်အထောက်အကူပြုရန်လူမှုမီဒီယာ content တွေကိုထုတ်လုပ်သူရှာကြံနေပါတယ် ...
ဗီဒီယိုတစ်မိနစ်လျှင် $ 75 မှ Transcriptionists ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Orlando တွင်, FL Duration: TBD လစာ / နှုန်း $ .1.10 05 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကျနော်တို့ unscripted ဖေါ်ထုတ်နိုင်သူ transcriptionists ရှာဖွေနေတဲ့ယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမယောဘကိုကူးရေးသော အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အင်တာဗျူး။ ဤရွေ့ကားစိန်ခေါ်မှုဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ ဒါကရေရှည်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူယာယီအနေအထားဖြစ်လိမ့်မည် ...
Gaffer ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Charleston, SC Duration:5/ 29 -5/ 31 / 05 အပေါ် posted 15 / 19 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘ, တဦးတည်းဖန်တီးမှု Gaffer ရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 05 / 29 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply နှင့် 3-နေ့,3ကင်မရာစတူဒီယိုအစိမ်းရောင် screen ကိုရိုက်ကူး / ဒစ်ဂျစ်တယ်အင်တာဗျူးစီးရီးဘို့တဆုပ်ကိုင်။ တည်နေရာ: Charleston SC, မေလ 29-31 Lighting နဲ့ချုပ်ကိုင်ထားဂီယာ ...
ချုပ်ကိုင်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Charleston, SC Duration:5/ 29 -5/ 31 / 05 အပေါ် posted 15 / 19 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘ, တဦးတည်းဖန်တီးမှု Gaffer ရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 05 / 29 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply နှင့် 3-နေ့,3ကင်မရာစတူဒီယိုအစိမ်းရောင် screen ကိုရိုက်ကူး / ဒစ်ဂျစ်တယ်အင်တာဗျူးစီးရီးဘို့တဆုပ်ကိုင်။ တည်နေရာ: Charleston SC, မေလ 29-31 Lighting နဲ့ချုပ်ကိုင်ထားဂီယာ ...
4 ၏စာမျက်နှာ 420«ပထမဦးစွာ...«23456	»	102030...နောက်ဆုံး»